Diego Costa oo u sheegay Chelsea inay xitaa AMAAH ku bixiyaan haddii aysan iibineyn - Wargane News
Home Sports Diego Costa oo u sheegay Chelsea inay xitaa AMAAH ku bixiyaan haddii...
Diego Costa oo u sheegay Chelsea inay xitaa AMAAH ku bixiyaan haddii aysan iibineyn
Costa ayaa shabaqa soo taabtay ciyaartii xalay uu xulka Spain 2-1 uga adkaaday Macedonia isreeb reebka koobka adduunka, waxaana ka go’an inuu boos joogta ah ka ciyaaro si uu xulkiisa boos uga helo koobka adduunka.
Tababare Antonio Conte ayaa af cad ugu sheegay Costa inuusan ka mid ahayn qorshihiisa Chelsea ee kal ciyaareedka cusub.
Dhaliyaha reer Spain ayaa doonaya inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Atletico Madrid laakiin suuro gal ma noqoneyso iminka maadaama kooxda laga ganaaxay suuqa, laakiin laacibka ayaa doonaya in ay Blues amaah ku sii fasaxdo.
“Heshiis ayaan kula jiraa Chelsea, waa inay gartaan waxa ay igu sameynayaan, annigana waa inaan sugaa aana ogaadaa go’aanka ay kooxdeyda qaadaneyso.” Costa ayaa sidaa yiri mar uu ku sugnaa caasimada Macedonia ee Skopje.
“U dagaalanka booska waa inuu noqdaa daacad inaan joogo aana u dagaalamo, laakiin daacad maaha dagaalku waana inaan tagaa.
“Labo sano oo qandaraas ah ayaan kula joogaa Chelsea, waa inay go’aan qaataan, haddii ay i iibiyaan waxaan baadi goobi doonaa dooqa ugu fiican.
“Atletico Madrid waa mid ka mid ah, laakiin waxay la micno noqon doontaa inaan ciyaareyn ilaa laga gaaro bisha Janaayo.
“Waxaan aadi karaa koox ka dhisan Spain ama Brazil ama meelo kale, laakiin waa inaan ciyaaraa.
“Atletico waa koox aan jaceyl badan u hayo, haddii aan aado halkaa iyo haddii kalaba waan sii jeclaan doonaa iyaga.”.